Maamul Goboleedyada awood ma u leeyihiin go'aan ka gaarista nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa? | Keydmedia
Maamul Goboleedyada awood ma u leeyihiin go’aan ka gaarista nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa?
Isku dhex-yaaca arrimaha doorashooyinka dalka ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xilliyada kala guurka ah ayaa loo sababeeyay Dastuurka qabyada ah oo aan weli la kala saarin.
Muqdisho, Soomaaliya - Xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Dhuusamreeb ay ku shirsanyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka, kana arinsanayaan qodobo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa arintaas ka hadlay Senator Axmed Macalin Cumar (Senator Nadiir) oo ka tirsan Aqalka Sare.
Senator-ka oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in maamul goboleedyada aysan sharciyad u laheyn, go'aan ka gaarista nooca doorasho ee dalka, balse ay leeyihiin kaliya kala tashi.
Waxaa uu sheegay in dalka uu leeyahay hay'ad sharci dejineed iyo guddiga doorashooyinka oo arintaan loo xilsaaray, waxaa uuna xusay in baarlamaanka Soomaaliya meel mareeyeen sharciga dooraahooyinka Madaxweynaha qalinka ku rogay.
Senator Nadiir ayaa sidoo kale sheegay in madaxda maamul goboleedyada halka ay ku mashquuli lahaayeen shirarka ku saabsan doorashooyinka, ay la gud boontahay ka hadalka amniga iyo hormarinta deegaanada ay masuulka ka yihiin.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay maamulka Puntland oo uu sheegay in xaalad amni ka jirto, isagoona u xusay in ay ka dhaceen weeraro ismiidaamin ah oo lagu dilay masuuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland.
Inkastoo Maamulka Puntland sanadihii la soo dhaafay ka mid aheyd deegaanada nabdoon, hadana waxaa sanadkaan gudihiisa kaliya weeraro looga dilay guddoomiyeyaashi gobolada Nugaal iyo Mudug.
Cabdisalaan Xirsi Xasan (Gu'jir) guddoomiyihii gobolka Nugaal ayaa 29 kii Maarso weerar ruux isi-soo soomiidaamiyay ah xilli habeen ah lagu dilay, halka guddoomiyihiin gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur iyo qaar ka tirsan ilaaladiisa lagu dilay qarax ismiidaamin ah17 May ee isla sanadkaan gudihiisa ah.
Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa hataan ku sugan Dhuusamareeb, iyagoona ganafka ku dhuftay hadalkii guddiga doorashooyinka ee ahaa in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, sabo la xiriiro diyaar garow la’aan iyo arrimo kale.